Asain’i VMSA hampihavana ara-panahy ny Filohampirenena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mihazakazaka ny te ho zanak’i… Tsia tsy “zanak’i dada” akory fa te ho zanak’Andriamanitra satria izany no fiantso ireo mpampihavana. Fijery kristianina izay famaritana izay. Ilay kristianina vonona hihavana amin’ny fahavalony.
Raha ny fijery ny zava-misy dia mbola tsy mifanakaiky amin’izany famaritana ny fampihavanana araka ny foto-pisainana kristianina izay ny tazana eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena. Jereo ange…
Namory ny “movansy” dimy ny filoham-piangonana efatra mivondrona anatin’ny Ffkm (Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara). Movansy ? Efa nilaozan’ny toetr’andro izany famaritana izany kanefa mbola tsy hita izay nahasolo azy. Misy ny movansy efatra nahazatra : Zafy, Ratsiraka, Ravalomanana ary Rajoelina. Ity farany no tena nitsipaka ny fisian’ny Movansy Rajoelina fony izy filohan’ny Tetezamita. Nofoanana ny movansy Rajoelina rava ho azy ilay fampihavanana mampiantso ny movansy. Ny movansy fahadimy ankehitriny dia ny an’ny filoha Rajaonarimampianina. Tsy maintsy antsoina hoe movansy Rajaonarimampianina izy ity satria dia izay akaiky ny filoha Rajaonarimampiaina no nalefa nisolontena azy nandritra ny fampihavanana nataon’ny Ffkm ny tapaky ny volana novambra teo. Ireo mpiandraikitra ambony ao anatin’ny antoko Hvm no nalefan’ny Filoha Rajaonarimampianina nisolo tena azy fa tsy izay mahasolotena ny vahoaka akory (efa Filoham-pirenena izy).
Namaly ny fanasan’ny Ffkm avokoa ireo ankolafy 5 ka samy nandefa solontena avy araka ny fangatahan’ny Ffkm. Tsiahivina etoana ireo nalefan’ny ankolafy tsirairay nisolotena ireo filoha nitondra teo aloha sy ny amperinasa : Ankolafy Zafy dia ny Pr Ramiandrisoa, Ankolafy Ratsiraka nahitana an-dRtoa ramisandrazana sy Atoa Montfort, Ankolafy Ravalomanana dia nahitana an-dRtoa isany Olga Ramalason sy Ihanta Randriamandranto, ny depiote Razafintsiandraofa Brunelle sy Rtoa Ratsivalaka Michelle, Ankolafy Rajaonarimampianina (Rakotovao Rivo, Mohamed Rachid, Harrison Randrianarimanana).
Rehefa nifarana ny dinika teo ambany fitarihan’ny Filoham-piangonana efatra dia tsapa fa samy manana ny fampihavanany ny mpandray anjara. “Hihavana izahay raha…” ary dia mifanipaka ny tohiny avy eo na sarotra tanterahina mihitsy aza. Tahaka ny milaza hoe “aleo tsisy izany fampihavanana izany”, “Tsy mila izany ho tanteraka ny mpanao politika malagasy…”, “Tsy izany no iankinan’ny fiainam-bahoaka…”
Ny filoham-pirenena dia milaza koa fa izy no mitarika ny fampihavanam-pirenena (toa te hilaza izy fa ny azy no manara-penitra… raha ny fandraisana ny fomba fiteniny). Saingy… Efa ho herin-taona sahady izao no nanaovan’ny filoha Rajaonarimampianina fianianana amin’ny maha filoham-pirenena azy kanefa… Kanefa… mbola tsy tazana ilay fampihavanana tena tiany hatao ary nampanantenainy raha nanao ny fianianany izy teo Mahamasina. Eo imolotra ihany hatreto.
Ho mpampihavana ara-panahy ?
Ny an’ny mpanara-dia azy moa dia ireny ny fanambarana nataon’ny Vondrona Miaro ny Safidim-bahoaka ny Ara-dalàna (Vmsa). Nilaza ny Vmsa fa “tokony ho velarina bebe kokoa na ny sehatra na ny mpandray anjara amin’ity resaka fampihavanam-pirenena ity”. Izany dia araka ny hita ao amin’ny fanambarana nataon’ny Vmsa ny 21 novambra teo. Izany hoe aleo ho maro ny mpandray anjara amin’izay sarotra ny mahita ny marimaritra iraisana ve no dikan’izao fanambarana izao ? Raha ny izy tokoa dia efa tokony hahafaoka be ny “movansy Rajaonarimampianina” izay filoha amperinasa, voafidim-bahoaka. Araka ny fiteny mahazatra dia efa légal ary légitime ny filoha amperinasa. Ny fangatahan’ny Vmsa ny fanitarana ny mpandray anjara dia toa milaza fa tsy manana ny légitimité ireo nisolotena ny filoha Rajaonarimampianina ireo. Satria ve Hvm no betsaka ? Manana mpandrindra nasionaly ny Vmsa ka ireto izy ireo : Voninahitsy Jean Eugène, Reboza Julien, Mahavimbina Alain, Rasamoelina Brigitte, Toto Lydia, Vaovao Benjamin izany hoe iray isaky ny faritany teo aloha. Hita araka izany fa tsy avy amin’ny Hvm ny mpitarika ny Vmsa.
Misy voambolana roa no nanaitra tamin’ny fanambarana navoakan’ny Vmsa.
Voalohany. Adika tsy hanalana na hanovàna izany ampahany nalaina tamin’ny fanambarana izay nanaitra : “…mandrisika ny Filoham-pirenena mba hanohy ny ezaka fandraisana antanana ny fanatanterahana ny fihavanampirenena izay ventesiny hatramin’izay, na amin’ny sehatra ara-panahy sy ny maha-olona izany…” Ity sehatra ara-panahy ity no manaitra. Inona ilay sehatra ?
Faharoa. “…izy irery (TTF : ny filoham-pirenena io) ihany no manana hery fanatanterahana izany amin’ny ara-dalàna (force exécutoire légale)…” Moa tsy didy jadona ve izany ? fa angaha moa tsy mbola hampandalovina eo amin’ny Antenimieram-pirenena izay hevitra tapaka ary havadika ho lalàna ka mpanatanteraka ny filoham-pirenena avy eo ? Sa izao ilay hoe sady mandidy no manapaka… ? Mampatahotra.
Mety ho diso fijery Ratalata eto kanefa ny ahiahy tsy ihavanana ary ny alahelo aleo ambara havanana hatrany.